काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनः प्रदेश १ का १४ जिल्लामा को-को छन् सभापतिका दाबेदार ? [हेर्नुहोस नामसहित] - Sagarmatha Online News Portal
काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनः प्रदेश १ का १४ जिल्लामा को-को छन् सभापतिका दाबेदार ? [हेर्नुहोस नामसहित]
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै जिल्लाहरुमा पनि नेतृत्वको होडबाजी सुरु भएको छ । सोही क्रममा प्रदेश १ का सबैजसो जिल्लामा सभापति पदका आकांक्षीहरु नेताहरुको विश्वास लिन र कार्यकर्ताहरुको मन जित्ने अभियानमा जुट्न थालेका छन् ।
मोरङ सभापतिका लागि विशेषगरी केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाका आधा दर्जन नेता लाइनमा देखिएका छन् । त्यसमा पनि देउवा इतर पक्षका नेताहरु सभापतिको दौडमा बढी छन् ।
काँग्रेसका मध्यमार्गी नेता डा. नारायण खड्काको गृहजिल्ला उदयपुरमा जिल्ला सभापति पदमा पौडेल समूहका तीनजना र देउवा समूहका एकजना आकांक्षी देखिएका छन् । पौडेल समूहबाट वर्तमान सभापति विदुर बस्नेत दोहोरिने दाउमा छन् । आफूलाई दोहोरिन सुझाव आइरहेको भन्दै उनले नेता कार्यकर्तासँग संवादमा रहेको रातोपाटीलाई बताए ।
काँग्रेस नेता बलबहादुर केसीको गृहजिल्ला सोलुखुम्बुमा जिल्ला सभापतिका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । पौडेल पक्षबाट वर्तमान सभापति विनोदकुमार बस्नेतले दोहोर्याउन चाहेका छन् । पौडेल पक्षबाटै खिलराज बस्नेत र भोजराज कार्की पनि जिल्ला सभापतिको आकांक्षी देखिएका छन् ।
देउवा पक्षबाट पूर्वउपसभापति कृष्णप्रसाद निरौला र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार प्रकाशसिंह कार्कीका अतिरिक्त आदिबासी जनजाति समन्वय केन्द्रीय विभागका सदस्य आङछिरिङ शेर्पा, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष अशोककुमार झालाई पनि सभापतिको दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । याे समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित छ ।